Waraaqaha looxa, Xaashida Muraayadda looxa, Xaashida Muraayadda Caaga ah - Donghua
DHUA waxaa la aasaasay sanadkii 2000 si ay u bixiso xaashi tayo sare leh oo tayo sare leh, warqad muraayad akrilik ah iyo xaashiyo kala duwan oo balaastik ah.
KU SAABSAN SOO SAARKA
Si joogto ah u soo saar alaab tayo sare leh
Xaashida loo yaqaan 'Acrylic-mirror-sheet'
Muraayad loo yaqaan 'Acrylic-convex-mirror'
Daawada ka-hortagga ceeryaanta waxaa lagu dhejiyaa muraayadda 'polycarbonate muraayad tayo sare leh' ee fasalka 10 ee qolka nadiifka ah. Muraayadda Anti-Fog waxaa loo farsameeyay si ay ugu adkeysato kulaylka xaaladaha ugu adag. Caadi ahaan loo isticmaalo muraayadaha xiirista / qubeyska, muraayadaha ilkaha, iyo sawnada, codsiyada naadiyada caafimaadka. Magaca Badeecada Muraayada ka-hortagga ceeryaanta, Muraayada Ceegaaga, Muraayadaha Bilaashka ah ee Waxyaabaha Polycarbonate (PC) Xaashida Xaashida Midab Cad 915 * 1830mm, Qaab-u-dhumuc weyn oo caado ah 1.0 - 6.0 mm Masking Polyfilm MOQ 50 sheets ...
Muraayadda Badbaadada iyo Amniga 'Convex Mirror', Muraayada Wadada Wadada 'Convex Mirror Muraayadda loo yaqaan' convex Muraayad 'waa meel dusha ka tarjumaysa (ama dusha kasta oo ka tarjumaysa qayb ka mid ah wareegga) kaas oo dhinaceeda bullaacadda ah ay ku wajahan tahay isha iftiinka. Waxay ka tarjumaysaa sawir xagal ballaaran oo cabbirkiisu hooseeyo si loo ballaariyo goob aragti si loo caawiyo kordhinta muuqaalka meelo kala duwan oo loogu talagalay nabadgelyada ama codsiyada kormeerka iyo kormeerka waxtarka leh. DHUA waxay siisaa tayada ugu fiican muraayadaha qulqulaya ee bixiya superi ...
Ka faa'iideysiga miisaanka, saameynta, burburka u adkaysta, ka qaalisan kana adkaysi badan muraayadaha, xaashiyaha muraayadda acrylic-ka ah waxaa loo isticmaali karaa bedel ahaan muraayadaha dhaqameed dhaqameed ee dalabyo iyo warshado badan. Sida dhammaan acrylics, xaashiyahayada muraayadda acrylic-ka ah si sahal ah ayaa loo goyn karaa, loo qoday, loo sameysan karaa wax la alifay oo leysku qotomiyey. Xaashidayada muraayaduhu waxay ku yimaadaan midabbo kala duwan, dhumuc iyo cabbirro kala duwan, waxaanan bixinnaa ikhtiyaarrada muraayadaha ee la jarjaray. Magaca badeecada muraayad muraayad loo yaqaan 'plexiglass' ...
Xaashida loo yaqaan 'Clear Plexiglass Acrylic Sheet', 'Transparent Plastic Sheet Acrylic', oo sidoo kale loo yaqaan 'Plexiglass', waa aaladda loo yaqaan 'thermoplastics' waxaana inta badan lagu bixiyaa xaashiyo sida beddelaad ama jajab u adkaysta muraayadaha. Waraaqaha looxa ee loo yaqaan 'Acrylic Sheets' waxay muujinayaan astaamo u eg muraayad-cad, dhalaal, iyo hufnaan-laakiin kala badh culeyska iyo marar badan saameynta caabbinta muraayadaha. Way fududahay in la been abuuro, oo si fiican loogu xiro xabagta iyo dareeraha, waana sahlan tahay in lagu habeeyo qaab-dhismeedka iyada oo aan lumin caddaynta indhaha. Donghua badanaa ...
Waraaqaha Muraayadda midabka leh ee midabka leh, Xaashida midabka leh ee loo yaqaan 'Acrylic Plexiglass Sheet' Ka faa'iideysashada miisaanka, saameynta, u adkaysiga burburka, ka qaalisan kana adkaysi badan muraayadaha, xaashiyaha muraayadda acrylic-ka ah waxaa loo isticmaali karaa inay beddelaan muraayadaha-dhaqameed dhaqameed ee dalabyo badan iyo warshado badan. Sida dhammaan acrylics, xaashiyahayada muraayadda acrylic-ka ah si sahal ah ayaa loo goyn karaa, loo qoday, loo sameysan karaa wax la alifay oo leysku qotomiyey. Go'aannada muraayaddeennu waxay ku yimaadaan midabbo kala duwan, dhumuc iyo cabbirro kala duwan, waxaanan bixinnaa jajab -...
Xaashida Muraayadda Sare ee 'Gloss PETG Mirror', Xaashida Muraayadda ee 'PETG Plastic Mirror Sheet' waa xaashi balaastiig ah oo aad u kala jaad ah oo inta badan loo isticmaalo injineernimada, qurxinta, weelasha wax lagu keydiyo, iyo in ka badan maadaama ay si fudud u kululaan karto isla markaana la jaray si loo abuuro qaabab adag oo leh faahfaahin sax ah. Muraayadda 'PETG' waxay siisaa faa iidooyin kala duwan oo ka imanaya hufnaan ka sarraysa, xajmiga dhalaalka dusha sare, ma jiro wax walwal ah oo caddeeya, waxay aqbashaa khadadka iyo rinjiga, waana FDA-u oggolaatay xiriirka cuntada. Xaashida 'PETG Mirror' waxay soo bandhigeysaa been abuur badan ...
Muraayadda Polycarbonate, PC Mirror, Xaashida Muraayadaha Polycarbonate Sida la ogyahay, muraayada polycarbonate waa substrate ugu saameynta badan. Muraayaddeenna polycarbonate (PC) waa xulasho habboon haddii aad u baahan tahay dusha sare oo muraayad leh oo leh iska caabin kuleyl badan iyo xoog saameyn leh. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka muraayadayada 'polycarbonate' waa xoog saameyn sare leh, adkeysi, iska caabin kuleylka badan, cad-cad iyo xasiloonida cabirka. Waxaan leenahay dhumucdiisuna tahay 0.25 ~ 6 mm, cabirkooduna yahay 915 * 1830 mm, oo ah midab lacag cad leh oo lagu ogaanayo ...
Muraayada Muraayada Muraayada ah, Muraayadaha Qurxinta ee loo yaqaan 'Acrylic Mirror Mirror' DIY Wall Qurxinta Muraayada Muraayadaha aan Muraayadaha aheyn ee Guryaha Nolosha Qolka Jiifka Qurxinta Naqshadeynta muraayad qurxan oo qurux badan oo loogu talagalay gurigaaga ama xafiiskaaga ayaa qolkaaga siin doonta muuqaal nasasho leh, waxay abuuri doontaa jawi xiiso leh waxayna ku siin doontaa taabasho la yaab leh adiga gudaha. Muraayada 'Dhua muraayadda derbiga' decal decal decal waxaa laga sameeyay acrylic caag ah, dusha sare ayaa ka tarjumaya gadaalna dhabarka ayaa leh laftiisa; Waxaa jira filim ilaalin ah dusha muraayada si looga hortago muraayada ...
Fadlan Farriin noogu reeb oo 24 saacadood gudahood ayaan kula soo xiriiri doonnaa.
Thermoplasticsku waa shey dhexdhexaad u ah muujinta iyo ikhtiraaca. Xulashadayada tayo sare leh, xaashi acrylic badan leh iyo alaabada muraayadda balaastigga ah waxay ka caawineysaa naqshadeeyayaasha inay u keenaan himilooyinkooda hal abuurka ah nolosha. Waxaan bixinnaa midabyo kala duwan, dhumuc, qaabab, xajmiga xaashiyaha iyo qaabeynta polymer si loo buuxiyo baahiyaha farshaxan la'aanta iyo codsiyada naqshadeynta. Waxaan ku siineynaa xulasho ballaaran naqshadaha loo yaqaan 'acrylic naqshadeynta & wax soosaarka tafaariiqleyda & ganacsiyada iyo qurxinta guryaha oo aad u fara badan o ...
Faahfaahinta alaabta Acrylics waa polymer-ka methyl methacrylate (PMMA), oo leh guryo badan oo faa'iido u leh bandhigyada bandhigyada ganacsiga ama bandhigyada barta-iibsiga. Waxay yihiin kuwo cad, qafiif ah, adag & saamayn u adkaysta, la hagaajin karo, si fudud loo been abuurto oo ay fududahay in la nadiifiyo. Fursadaha leh acrylics-ka ayaa ka baxsan bandhigyada bandhigyada ganacsiga. Noocyada loo yaqaan 'Acrylics' waa xulasho caan ah oo loogu talagalay walxaha kale ee tafaariiqda sida mannequins, bandhigyada daaqadaha, rakibayaasha darbiga lagu rakibay ama khaanadaha, muujinta miisaska miiska iyo calaamadaha ...
Faahfaahinta alaabta Acrylic wuxuu ku helay caan ka ahaanshaha muraayadda sameynta sanadihii la soo dhaafay sabab wanaagsan. ● Waa mid jajaban oo khafiif ah, kana duwan muraayadda. Astaamahan ayaa ka dhigaya mid loo doorto sawir qaadayaasha la shaqeeya carruurta iyo qoysaska - gaar ahaan carruurta. Ku laalaada loox leh xayndaab ama qolka ciyaarta ayaa ka badbaado badan muraayadda kale, maadaama ay u dhowdahay inay waxyeello u geysato qofna hadday dhacdo. Intaa waxaa dheer, burburka iyo lightweigh ...
Faahfaahinta alaabta Qalabka inta badan loo isticmaalo codsiyada iftiiminta waa acrylic iyo polycarbonate. Xaashida loo yaqaan 'Acrylic plexiglass' iyo 'polycarbonate sheets' labaduba waa xaashiyo balaastiig ah oo adag oo waara oo leh fursado muuqaal oo xagga sare ah. DHUA badanaa waxay siisaa go'yaal akrilik ah dalabkaaga nalka. Nidaamkayaga muraayadaha indhaha ayaa loo adeegsadaa sameynta Guddi Hagaha Nalka (LGP). LGP waa guddi khafiif ah oo loo yaqaan 'acrylic panel' oo laga sameeyay 100% Virgin PMMA. Isha iftiinka waxaa lagu rakibay cidhifyadeeda (s). Waxay ka dhigeysaa l ...
Acrylic waa mid ka mid ah walxaha ugu caansan ee loo isticmaalo sameynta bandhigyada POP, gaar ahaan warshadaha sida qurxinta, moodada, iyo teknolojiyada sare. Sixirka acrylic saafi ah wuxuu kujiraa awooddiisa inuu siiyo macaamilka muuqaal buuxa oo ah badeecada la ganacsanayo. Waa shey fudud oo lala shaqeyn karo maadaama la qaabeyn karo, la jari karo, midab leh, loo sameyn karo loona dhegi karo. Iyo dusha sare ee dusha sare, acrylic waa shey aad u wanaagsan oo loo isticmaalo daabacaadda tooska ah. Oo waad awoodi doontaa inaad xafido bandhigyadaada y ...
Qalabka calaamadaha ee ka socda DHUA wuxuu daboolayaa boodhadhka, buugaagta dhibcaha, calaamadaha dukaanka tafaariiqda iyo bandhigyada xayeysiiska saldhigga taraafikada. Wax soo saarka guud waxaa ka mid ah calaamadaha aan korantada lahayn, boorarka dhijitaalka ah, shaashadaha fiidiyowga iyo calaamadaha neon. Dhua badiyaa waxay bixisaa qalab akrilik ah oo laga heli karo istaandarka, iyo xaashiyo go'an-ilaa-xajmi ah iyo been abuur khaas ah oo loogu talagalay codsiga calaamadaha. Calaamadaha acrylic-ka waa xaashi balaastik ah oo dhalaalaya dhalaalaya. Waxay ku timaaddaa midabbo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan baraf cad oo saafi ah. Nooca calaamaddan ayaa ah l ...
DHUA waxay soo saartaa muraayadaha amniga & muraayadaha amniga, muraayadaha barta indha la 'iyo muraayadaha kormeerka oo laga sameeyay tayada muraayadda acrylic tayo sare leh taas oo ah miisaanka fudud, burburin u adkeysi leh iyo caddayn aad u fiican. DHUA muraayadda isweydaarsiga ayaa si muuqata loogu isticmaalayaa tafaariiqda, bakhaarka, isbitaalka, meelaha dadweynaha, dekedo lagu raro, bakhaarro, waabyo waardiyayaal ah, tas-hiilaad wax soo saar, garaashyada gawaarida la dhigto iyo waddada ka timaadda waddooyinka iyo isgoysyada. Faa'iidooyinka isticmaalka muraayadda loo yaqaan 'convex muraayadda' ee amniga iyo badbaadada ayaa hoos ku taxan: Fudud, ...
Waa Noocee ah Muraayadaha Balaastikada ah ee Badali Kara Muraayadaha Muraayadaha iyadoo aan wax isbedel ah ku dhicin xaalada meelaha waaweyn? Marka hore waxaan u baahanahay inaan fahano astaamaha aasaasiga ah ee agabkan: 1. Muraayadda loo yaqaan 'Acrylic mirror (Acrylic, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate) Faa'iido: daahfurnaan sare, muraayad dusha sare ...
Suuqa Loogu Talagalay Plexiglass Wuu Soo Kordhayaa
Suuqa For Plexiglass Is Booming Plexiglass waa shey kulul si kadis ah, maxaa yeelay baahida fogaanta bulshada iyo ilaalinta ayaa korortay. Taasi waxaa loola jeedaa kor u kac weyn oo ganacsi oo loogu talagalay alaab-qeybiye loo yaqaan 'acrylic plexiglass'. Degdega wicitaanada ayaa bilaabmay bartamihii bishii maarso. Maadaama cudurka faafa ee coronavirus uu si deg deg ah u faafayo ...
Sida loo rakibo Xaashida looxa muraayadda looxa loo yaqaan 'Acrylic Mirror Sheet Acrylic mirror sheet' wuxuu sameeyaa wax ku ool ah oo qurux badan oo lagu daro derbiyada, albaabbada, iridda laga soo galo iyo waxyaabo kale oo badan, isagoo ku daraya taabashada casriga ah meel kasta oo aad ku dhejiso. dhalo inta lagu jiro s ...